सीमामा रहेकालाई जनतालाई प्रधान`मन्त्री`को सन्देश : यो देशभ`क्ति उम्लिने बेला होइन ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Political Views/सीमामा रहेकालाई जनतालाई प्रधान`मन्त्री`को सन्देश : यो देशभ`क्ति उम्लिने बेला होइन !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत सीमामा क्वारे`न्टाइनमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कोरोना`रहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रयास गरेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार सरकारी स`ञ्चार`माध्यमसँगको अन्तरवार्तामा प्रधानम`न्त्री ओलीले यो बेलामा संवि`धानको किताब हेरेर हिँड`डुलको अधिकार खो`ज्ने होइने नभएर कोरोनाबाट ब`च्ने रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँ`हरुलाई कोरो`नारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के सङ्क्र`मितलाई धमा`धम ल्याएर गाउँ`गाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भ`न्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छा`अनुसार होटलमा वा क्वारेन्टा`इन रा`ख्न भनेका छौँ ।
प्रम ओलीले केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारे`न्टाइनमा नजाने अनि दश`गजामा सु`त्ने गरेको पनि पाइएको बताउँदै नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि सरकारले सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको बताए। ‘जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ ।
सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँड`डुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो,’ प्रम ओलीले स्पष्ट पारे ।आफूले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरण`बद्धरूपमा कुरा गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुख`सँग कुरा गरेको छु । र अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्या`र्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।